Baiboly pejy 700 - Ny Baiboly
Voalohany < 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 Manaraka Farany
2 Piera toko 1 (tohiny)
19Ary mafy orina kokoa ho antsika amin'izany ny Soratra faminaniana, izay tsara raha dinihinareo, fa toy ny jiro manazava ao amin'ny toerana maizimaizina izany, mandra-pipoaky ny andro, sy iposahan'ny kintana fitarik'andro ao am-ponareo. 20Fantaro tsara anefa fa tsy avy amin'ny fisainan'olona fotsiny ny faminaniana rehetra ao amin'ny Soratra Masina; 21satria na oviana na oviana tsy nisy faminaniana nentin'ny sitra-pon ny olona, fa ny Fanahy Masina no nampiteny ny olo-masin'Andriamanitra izay notsindriany.
Sahy zavatra sy mirehareha loatra izy ireo, fa tsy matahotra ny hiteny ratsy ireo voninahitra akory, 11nefa na ny anjely izay mahery kokoa sy ambony fahefana aza, tsy mitsara sy tsy miteny ratsy azy ireo eo anatrehan'ny Tompo. 12Fa izy ireo kosa dia sahy maniratsira ny zava-tsy fantany akory, mova tsy ny biby tsy manan-tsaina natao ho fisambotra sy famono fotsiny, ka dia ho very amin'ny fahalotoany izy ireo: 13izany no ho valin'ny faharatsiany. Ny mahafinaritra azy ireo dia ny fý sendra isan'andro, ka feno tsiny amam-pondro izy; ataony fifaliana ho azy ny mamitaka anareo, amin'ny fiaraha-mihinam-py aminareo. 14Ny masony feno fijangajangana sy liam-pahotana lalandava; ny tsy miorin-tsaina tsara, angoleny; ny fony zatry ny fitiavam-bola; eny, zanaky ny fanozonana izy ireo. 15Niala tamin'ny làla-mahitsy izy ireo, ary nivily nanaraka ny làlan'i Balaama zanak'i Bosora, izay nankasitraka ny tambin'ny tsy fahamarinana, 16nefa nahazo anatra noho ny fivadihany ity mpaminany, fa niteny hoatra ny olona ny boriky moana, nisakana ny hadalany. 17Fantsakana ri-drano izy ireo, ary rahona avoivoin'ny tadio, ka aizina mainty be no miandry azy. 18Teny manodoka sy tsy misy heviny no itarihany an'izay vao nandao ny olon-dratsin'ny nofo sy ny fahalotoana. 19Ampanantenainy fahafahana izy ireo, nefa ny tenany aza andevon'ny fahalotoana, satria izay resy dia andevon'izay naharesy azy. 20Ary raha olona efa niala tamin'ny faholotoan'izao tontolo izao, noho ny fahalalana an'i Jesoa-Kristy Tompo sy Mpamonjy antsika, no mety ho lavo sy voasingotr'izany indray, dia ratsy noho ny voalohany ny toetrany farany. 21Satria aleo tsy nahalala ny làlan'ny fahamarinana izy, toy izay efa nahalala vao hihemotra handao ny lalàna masina nampianarina azy. 22Tanteraka amin'ireny ilay ohabolana marina hoe: Ny alika miverina amin'ny loany, ary ny kisoa voasasa mihosim-potaka indray.
2 Piera toko 3
Ny amin'ny fahatongavan'ny Tompo, sy ny farandro.
1Ry malala, ity no fanindroan'ny epistolà nosoratako ho anareo; ary izy roa dia samy entiko mampifoha ny sainareo mahitsy hitadidy tsara, 2mba hahatsiarovanareo ny zavatra nambaran'ny didin'ny Tompo sy Mpamonjy antsika nampianarin'ny Apostolinareo.
3Fantaro tsara aloha fa any am-parany any, dia hisy mpaniratsira fetsy ratsy, izay hanaraka ny danin'ny kibony, 4ka hilaza hoe: Aiza ity fampanantenany hoe ho avy? Fa hatrizay nahafatesan'ny razana izay, tsy misy miova ny zavatra rehetra, fa toy ny hatramin'ny nahariana izao tontolo izao ihany. 5Odian'izy ireo tsy fantatra fa hatramin'ny voalohany dia efa nisy tokoa ny lanitra, ary toy izany koa ny tany, izay niseho avy amin'ny rano sy natao tamin'ny rano, noho ny tenin'Andriamanitra, 6ary rano ihany koa no efa nandravana an'izao tontolo izao fahizany, tamin'ny nanasaforany azy. 7Ary raha ny amin'ny lanitra sy ny tany ankehitriny, dia mbola ny tenin'Andriamanitra ihany koa no mitana sy mitahiry azy hodorana amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy.
8Izao zavatra iray loha izao anefa no aoka ho fantatrareo, ry malala: amin'ny Tompo, ny indray andro dia hoatra ny arivo taona, ary ny arivo taona dia hoatra ny indray andro. 9Koa tsy ahemotry ny Tompo araka ny hevitry ny sasany akory ny fampanantenany, fa miandry anareo amim-pandeferana izy, mba tsy hisy very na dia iray aza, fa samy hanatona sy hibebaka daholo. 10Ho avy toy ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany andro izany, ny lanitra hirimorimo mankarenina, ny tenan-javatra rehetra ho levon'ny afo, ny tany mbamin'ny asa rehetra eo aminy hodorana.
11Koa raha tsy maintsy ho levona àry izao rehetra izao, ho toy inona no tokony ho fahamasinan'ny fitondran-tena amam-pitiavam-bavakareo, 12amin'ny fiandrasana sy fanafainganana ny hihavian'ny andron'ny Tompo, izay hahamay sy hahalevona ny lanitra, ary handoro sy hampiempo ny tenan'ny zavatra rehetra? 13Eny, araka ny fampanantenany, dia manantena ny lanitra vaovao sy tany vaovao isika, izay hanjakan'ny fahamarinana.
14Amin'ny fiandrasana izany, dia ataovy izay tratry ny ainareo, mba ho tsy manan-tsiny amam-pondro ary mihavana tsara no hahitan'ny Tompo anareo. 15Minoa fa ny haelan'ny fandeferan'ny Tompontsika dia ho an'ny famonjena anareo, toy ny nanoratan'i Paoly rahalahy malalantsika taminareo koa, araka ny fahendrena nomena azy. 16Toy izany koa no ataony amin'ny epistolàny rehetra izay ilazàny ny amin'izany zavatra izany; misy teny saro-pantarina anefa amin'ireny, izay aolan'ny sasany kely fahalalana sy ratsy orina, toy ny ataony amin'ny Soratra hafa koa, ka tonga fahaverezana ho azy.
17Izao àry, ry malala, dia efa nampahalalaina izany rahateo hianareo, koa mitandrema sao voatariky ny hevi-dison'ny ratsy fanahy, ka hiala amin'izay niorenanareo. 18Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesoa-Kristy Tompo sy Mpamonjy antsika. Ho azy anie ny voninahitra, ankehitriny sy mandrakizay. Amena.
1 Joany toko 1
Izay hitany ny amin'ny Kristy no lazainy - Ny fandehanana amin'ny mazava.
1Izay efa nisy hatramin'ny voalohany, sy efa renay, efa hitan'ny masonay, efa nodinihinay, ary efa notsapain'ny tànanay, dia ny Teny fiainana; - 2fa efa naseho ny fiainana, sy efa hitanay, ary vavolombelona izahay, ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'ny Ray sy naseho taminay, - 3eny, izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo kosa, mba hanananareo fikambanana aminay koa; ary ny fikambananay dia amin'ny Ray sy amin'i Jesoa-Kristy Zanany. 4Ary izahay no manoratra izany aminareo, dia mba ho feno ny fifalianareo.
5Izao no teny renay taminy, sy ambaranay aminareo: Andriamanitra dia fahazavana, ary tsy misy aizina akory ao aminy. 6Raha milaza ho manana fikambanana aminy isika, nefa mandeha amin'ny maizina, dia mandainga sy tsy manao ny marina. 7Fa raha mandeha amin'ny mazava toa azy ao amin'ny mazava koa isika, dia mifampikambana isika rehetra, ary ny ran'i Jesoa-Kristy Zanany dia manadio antsika amin'ny ota rehetra.
Pejy: Voalohany < 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2992 seconds